HumHub နှင့်သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ Linux မှ
Luigys toro | | applications များ, GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
လူမှုရေးကွန်ရက်များ လူအများနှင့်ကုမ္ပဏီများအပေါ် ပိုမို၍ သြဇာသက်ရောက်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောကြောင့်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများသည်အလျင်အမြန်နှင့်မည်သည့်နေရာမှမဆိုဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များစွာရှိသည်။ In ကိုယ်ပိုင်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ HumHub, သင်လိုချင်သောလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်၊ ပြုပြင်ရန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးမည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်။
1 HumHub ဆိုတာဘာလဲ။
2 ဘာကြောင့် HumHub ကိုသုံးရသလဲ။
3 HumHub ထူးခြားချက်များ
3.1 HumHub သည်ရိုးရာလူမှုဆက်သွယ်ရေးကိုဖွင့်နိုင်သည်
3.2 HumHub သည် "နေရာများ" ဖန်တီးခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်
3.3 HumHub သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရောနစ်ကိုယ်ပိုင်ကဒ်ပြားကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
3.4 HumHub သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နိုင်သည်
3.5 အခြား HumHub ထူးခြားချက်များ
4 HumHub အွန်လိုင်းကိုစမ်းကြည့်ပါ
5 HumHub ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
5.1 HumHub ကို install လုပ်ရန်အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ
5.2 HumHub ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များ
5.3 HumHub ကို install လုပ်ရန် Debian / Ubuntu packages များ
5.4 HumHub တပ်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်
5.5 HumHub ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်
5.5.1 အဓိကဝက်ဘ်ဆိုက်မှ HumHub ကို download လုပ်ပါ
5.5.2 github မှ HumHub ကို Download လုပ်ပါ
5.6 HumHub ကိုချိန်ညှိခြင်း
5.7 HumHub Installer စတင်ခြင်း
5.7.1 E-Mail ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
5.7.2 URL ပြန်ရေးခြင်းကိုဖွင့်ခြင်း (optional)
5.7.3 Cron ဂျော့ဘ်ကို Enable လုပ်ပါ
5.8 Error / Debugging ကိုပိတ်ပါ
HumHub သည် လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သည် php ယင်းနှင့်အတူ Yii မူဘောင်၎င်းသည်ပေါ့ပါး။ စွမ်းအားပြည့်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောသင့်ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်စတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။
HumHub လိုအပ်ချက်အားလုံးနီးပါးအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးချဲ့သော themes နှင့် module များကိုထောက်ပံ့သည်။
HumHub ၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပြည်တွင်းပူးပေါင်းမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အသုံးပြုသူအနည်းငယ်မှသည်ရာနှင့်ချီသော ၀ န်ထမ်းများရှိသောကုမ္ပဏီများတွင်အသုံးပြုသောကြီးမားသော Intranets အထိရှိသည်။ HumHub သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးမြှင့်စေခြင်း၊ သင်၏ဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ကျောင်းသားများကိုသင်ကြားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ဘောလုံးအသင်းကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုသည်
ဘာကြောင့် HumHub ကိုသုံးရသလဲ။
HumHub ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည့်အဓိကအကျိုးကျေးဇူး ၄ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည်။
HumHub ပွင့်နေသည်ဖြေ - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်လုပ်ပြီးသောအလုပ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးတိုးတက်စေရန်ပင်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုနည်းတူစွာသင်သည်ရပ်ရွာမှရရှိသောအကြံပြုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
HumHub သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ အားကောင်းတဲ့ module တစ်ခုနှင့်အတူတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် HumHub တတိယပါတီကိရိယာများကိုသုံးခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဖြစ်သည်။
HumHub သည်လုံခြုံသည်။ သင်၏ဆာဗာ၊ သင်၏ဒေတာ၊ HumHub ၎င်းသည် self-host ပြုလုပ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး server အားလုံးနီးပါးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သင်သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသည်။
HumHub တွင်ကြီးမားသောအထောက်အပံ့ရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိသည်သို့မဟုတ်သူတို့သည်သင့်ကိုတစ် ဦး တည်းထားခဲ့မည်။ သူတို့သည်သင်၏စီမံကိန်းများနှင့်သင့်ကိုအထောက်အပံ့ပေးပြီးပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသောကျွမ်းကျင်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည် HumHub.
အခြားလူမှုရေးကွန်ရက်များ၌ပြုလုပ်သကဲ့သို့သူ၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်သာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများရေးသားခြင်း၊ ဖိုင်များဝေမျှခြင်း၊ မှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့်သင်အလိုရှိသူကိုဖော်ပြပါ။
HumHub သည် "နေရာများ" ဖန်တီးခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်
ဆက်သွယ်ရေးအတွက် HumHub နေရာများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အာကာသတစ်ခုသည်မည်သည့်အရာ၊ မည်သည့်ပရောဂျက်၊ အုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ နေရာတစ်ခုစီအတွက်အသုံးပြုသူများစွာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
HumHub သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်၊ သင်၏အစုစုကိုဖန်တီးရန်၊ အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်၊ အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည့်သင့်တော်သောလူကိုရှာရန်၊ သင်၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်းအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြင့်အသိပေးရန်ခွင့်ပြုသည် vCard ။ La လိပ်စာကဒ် ၎င်းသည်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုဖလှယ်ရာတွင်အသုံးပြုသောစံပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေးကဒ်များဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမားရိုးကျစီးပွားရေးကဒ်များနှင့်တူညီသည်။
module တွေနှင့်အတူသင်ဘာမှပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါတယ် HumHub။ သင်၏လိုအပ်ချက်များအရနေရာများ၊ profile များနှင့်အခြားအရာများ။ အခြားလူမှုကွန်ယက်များတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
တချို့ module တွေထဲမှာရရှိနိုင်ကြသည် HumHub စျေးကွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အခြား HumHub ထူးခြားချက်များ
အုပ်စုများ ဌာနခွဲများ၊ ဌာနခွဲများသို့မဟုတ်အခြားအရာများမှအသုံးပြုသူများကိုစည်းရုံးပါ။
လမ်းညွှန်: နေရာများ၊ အသုံးပြုသူများနှင့်အုပ်စုများကိုစနစ်တကျရှာဖွေပါ။
မှတ်တမ်းများ - စာရွက်စာတမ်းများ၊ မာလ်တီမီဒီယာဖိုင်များကိုမျှဝေပြီး၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပါ။
ရှာရန်: လူများ၊ ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ဖိုင်များကိုအလွယ်တကူရှာပါ။
လက်ကိုင်ဖုန်းဗားရှင်း - ၎င်းကိုစမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များကဲ့သို့သောခေတ်မီကိရိယာအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုသည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် HumHub အွန်လိုင်းစမ်းကြည့်ပါစ အခမဲ့အစီအစဉ်။ ဒီဟာကိုကန့်သတ်ထားတယ်3အသုံးပြုသူများသည် y500 ကို MB သိုလှောင်မှု။ သင်၏အစီအစဉ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို HumHub ဒိုင်ခွက်တွင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
HumHub ကို install လုပ်ရန်အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ
PHP ကို ​​5.4 +
Shell အား (ဥပမာ ssh) ဆာဗာသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်
PHP CUrl တိုးချဲ့မှု (SSL ပံ့ပိုးမှု / w)
PHP Multibyte String ပံ့ပိုးမှု
PHP Zip တိုးချဲ့မှု
PHP INTL တိုးချဲ့မှု
PHP ကို ​​FileInfo extension ကို
HumHub ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များ
PHP LDAP အထောက်အပံ့
HumHub ကို install လုပ်ရန် Debian / Ubuntu packages များ
အဓိကဝက်ဘ်ဆိုက်မှ HumHub ကို download လုပ်ပါ
ရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း HumHub အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ပြီးပြည့်စုံသောအထုပ်၏တိုက်ရိုက် download။ ဤအထုပ်တွင်ပြင်ပမှီခိုမှုများအားလုံးပါဝင်ပြီး composer update မလိုအပ်ပါ။ download ပြီးသည်နှင့် package ကို extract လုပ်ပြီးသင်၏ web server ရှိ htdocs folder သို့ယူပါ။
github မှ HumHub ကို Download လုပ်ပါ
git branch တစ်ခုကို install လုပ်ဖို့၊ external dependency တွေကို download လုပ်ဖို့ composer update တစ်ခုကို run ရလိမ့်မယ်။
Clone Git သိုလှောင်ရုံ:
တည်ငြိမ်သောအကိုင်းအခက်သို့ပြောင်းရန် (ထောက်ခံအကြံပြု) -
HumHub webroot သို့သွားပြီးမှီခိုမှုများကိုရှာဖွေပါ။
/ ကာကွယ်ထား / config /
/ ကာကွယ်ထား / module တွေ
/ ကာကွယ်ထား / runtime
/ တင်ပို့သည် / *
အောက်ပါ executable ဖိုင်များကိုဖန်တီးပါ။
/ ကာကွယ်ထား / yii
(ဤဖိုင်တွဲများအားပုံမှန်အားဖြင့် ".htaccess" ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ )
တင် / ဖိုင်
HumHub Installer စတင်ခြင်း
သင်၏ browser တွင်တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်ကိုဖွင့်ပါ (ဥပမာ - http://localhost/humhub)
သင်အသုံးပြုနေသောပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ local သို့မဟုတ် remote SMTP server တစ်ခုကိုသင်သတ်မှတ်လိုပေမည်။ မေးလ်ဆာဗာဆက်တင်များကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည် Administration -> Mailing -> Server Settings.
ပုံမှန်အားဖြင့် PHP Mail Transport ကိုအသုံးပြုသည်။ http://php.net/manual/en/mail.setup.php
URL ပြန်ရေးခြင်းကိုဖွင့်ခြင်း (optional)
အမည်ပြောင်းပါ .htaccess.dista.htaccess local configuration ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါ (protected / config / common.php)
Cron ဂျော့ဘ်ကို Enable လုပ်ပါ
တစ်နာရီလျှင် Cron: > yii cron/hourly
Error / Debugging ကိုပိတ်ပါ
ပွောငျးလဲခွငျး index.php humhub ၏အမြစ် directory ကို၌တည်၏
ကိုဖယ်ရှား အညွှန်းကိန်း -test.php humhub ရဲ့ root directory မှာရှိတယ်
ဒီနှင့်အတူကျနော်တို့သင်ယူခဲ့တယ် HumHub နှင့်သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုမည်သို့တည်ဆောက်မည်နည်း။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအပိုင်းနှင့်အခြားသူများကိုတရားဝင်လက်စွဲစာအုပ်များတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားစာရေးခြင်းကိုမကူညီပါနှင့်။ သင်၏လူမှုကွန်ယက်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » HumHub နှင့်သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
PHP ကို ​​Fatal မှား - yii \_ အခြေစိုက်စခန်း \_ ErrorException
uncaught အမှား - undefined function ကိုခေါ်ပါ။
#0/var/www/html/humhub/protected/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(411): yii \_ web \_ ErrorHandler-> argumentToString (Array)
#2/var/www/html/humhub/protected/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(325): require ('/ var / www / html / h …')
#3/var/www/html/humhub/protected/vendor/yiisoft/yii2/base/View.php(247): yii \_ base \_ View-> renderPhpFile ('/ var / www / html / h …', Array )
#4/var/www/html/humhub/protected/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(241): yii \_ base \_ View-> renderFile ('/ var / www / html / h …', Array , အရာဝတ္ထု (yii \_ ဝဘ် \_ ErrorHandler))
#5/var/www/html/humhub/protected/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(295): yii \_ web \_ ErrorHandler-> renderFile ('@ yii / views / erro …', Array)
Michel Barria ဟုသူကပြောသည်
မေးခှနျးတစျခု .. မေးခှနျးပို့သောမက်ဆေ့၏ခေါင်းစဉ်ကိုသင်အဘယျသို့ပွောငျးလဲသနညျး။ ငါဘာသာပြန်ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးကိုထားပေမယ့်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်မဟုတ်ပါ။
Michel Barria အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းတယ် !!! တိုင်ပင်ဆွေးနွေး: သင်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်မလား ငါ intranet သို့ပုံတစ်ပုံကို upload လုပ်သောအခါ၎င်းသည် upload လုပ်သည်။ သို့သော် file သည် "blank" ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် intranet အတွင်းဖတ်မရသော "raw" png file တစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာ) ။ ဘာပြcouldနာဖြစ်နိုင်လဲ။ ပေးထားတဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပြproblemနာရှိပါသလား။ သင်၏ပညာကိုငါပိုင်၏။ ဟားဟား
ထိပ်ဆုံး PCB ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ ၁၀ ခု